Azịza ya ọ bụ eziokwu? Rabbi Michael Avraham
Azịza ya ọ bụ eziokwu?
Ramban na nkọwa ya na Akwụkwọ Deuterọnọmi (mmalite nke isi L) na-ekwu na e nwere mitzvah ime teshuva. A na-amụta mitzvah a site n'amaokwu (ibid.): "Na Shabbat nye Jehova bụ Chineke gị." N’aka nke ọzọ, Maimonides in the Laws of Nchegharị (XNUMX:XNUMX, XNUMX) na-ede na amaokwu a bụ nkwa Chineke kwere na ọgwụgwụ nke Izrel ga-echegharị. Usoro Maimonides nwekwara ikike ichegharị?
הọnọdụ (Mitzvah Shasad) na ndị ọzọ arụtụla aka na mgbagha pụtara ìhè n'oge a. N'otu aka, bAkwụkwọ nke Iwu (Mitzvah Ag) Maimonides dere:
Ọ bụ ya nyere iwu ka anyị kwupụta mmehie na ajọọ omume nile anyị mehiere tupu Gd arịgoro wee kwuo ha na azịza ya.
Enweghị iwu ebe a ịza azịza. A na-ekwu okwu nke nkwuputa ebe a dị ka mitzvah ọnọdụ: ọ bụrụ na mmadụ na-eme nkwupụta, ọ ghaghị ikwu nkwupụta na mmezu nke nkwupụta (na ihe a nile na-eweta àjà). Otu omume nke ime teshuva adịghị ka mitzvah ebe a (dị ka igbu mmadụ, onye chọrọ iri anụ ga-egbu n'ụzọ iwu kwadoro. Ogbugbu bụ ọnọdụ mitzvah, ma iri anụ kwa otu abụghị a mitzvah).
Site na nke a ka di na-ekwubi Onye nkuzi nkuzi (Mitzvah Shasad), na ọ bụrụ na onye mmehie alaghachighị, ọ nweghị ntaramahụhụ ọ bụla maka ichegharị (a na-ata ya ahụhụ naanị maka mmejọ gara aga). Ọ gbakwụnyere na ọ bụrụgodị na o chegharịrị ma o kwupụtaghị, ọ kagbughị mitzvah nke Davidoi mere, ebe ọ bụ na nke a abụghị mitzvah dị mma (ọ bụ 'existential' mitzvah, onye na-eme ya nwere ụgwọ ọrụ, ma onye ọ bụla mebiri emebi. ọ na-emeghị ya adịghị kagbuo ihe ọ bụla).
N'aka nke ọzọ, na ọnụọgụ nke mitzvos nke bu iwu nchegharị ụzọ, Maimonides dere dịka ndị a:
Otu iwu ka e nyere, na ọ bụ na onye mmehie ga-esi na mmehie ya laghachi n’ihu Chineke wee kwupụta.
N'ihi ya, foto yiri ka ọ dị iche na-apụta. Enyere onye ahụ mehiere iwu ka o si n’ajọ omume ya laghachi, na mgbakwunye, e nyekwara ya iwu ka o kwupụta. N'ebe a, a na-enye azịza ya dị ka matzah mere, ọ nwere akụkụ abụọ: ịza azịza na ikwupụta. Nke a megidere ihe anyị hụrụ n’okwu Maimonides bAkwụkwọ nke Iwu. Na nkọwa nke usoro Maimonides, ekwuru ụzọ dị iche iche, ma na nke ugbu a, ha akọwaghị n'ezie na nke a na-emegiderịta onwe ya. Anyị ga-enye ebe a ntụziaka dị iche, dabere na nghọta nke ọrụ nke Akwụkwọ nke Iwu Na ịghọta okwu nke azịza ya.
Dị ka a na-ahụ site na nyocha nke mgbọrọgwụ anọ dị n'ihu MaimonidesAkwụkwọ nke Iwu Ya, Maimonides na-etinye na quorum ya naanị mitzvos nwere iwu doro anya na Torah. Mitzvot nke a mụtara site na midrasha (lee ebe ahụ na mgbọrọgwụ nke abụọ), ma ọ bụ site na Sabra, ma ọ bụ site na Knesset, esoghị na kworum anyị. Ọ bụrụ otu a, enwere ike ịnwe ụgwọ sitere na Dauriyta nke ekwughị na yaAkwụkwọ nke Iwu. Nkwubi okwu bụ na eziokwu ahụ bụ na mitzvah adịghị apụta n'ebe ahụ apụtaghị na ọ bụghị mitzvah.
Onwere iwu doro anya na Torah gbasara iwu nchegharị? Anyị ahụwo n’elu, na dị ka Maimonides si kwuo, amaokwu “Na ụbọchị izu ike nke Onyenwe anyị bụ Chineke gị” bụ nkwa ọ bụghị iwu. Otú ọ dị, bAka siri ike Maimonides na-eweta ọrụ ichegharị dị ka ọrụ zuru oke. Ihe ngwọta maka nke a bụ na ọ bụ ezie na e nwere ụgwọ, ọ na-esite na sabra na ọ bụghị akwụkwọ nsọ, ya mere ọ dịghị apụta na ya.Safamatz. N'ụzọ dị iche, bAka siri ike Maimonides na-eweta ọrụ halak nke anyị niile, ma site na Torah, site na midrasha, ma ọ bụ site na Durban ma ọ bụ omenala, ya mere ọrụ ichegharị na-apụtakwa n'ebe ahụ.
Anyị achọpụtala na opekata mpe dịka Maimonides siri kwuo ọrụ ịza azịza dabere na Sabra. Ọ bụrụ n'ezie ọwa nke Chineke kere ka anyị ga-alaghachi na kpuchiri mmehie anyị, yabụ site na Sabra, anyị ga-eji ya mee ihe (lee Midrash nke pụtara na Brish). Shaarei Teshuvah Nye R.I, gbasara ala ala nke a na-akwọ ụgbọ n'ụlọ mkpọrọ, nke onye mkpọrọ ọ bụla kwesịrị ịga).
Nke a bụkwa ihe mere na H. Teshuvah Maimonides ọ bụghị nanị na-edepụta iwu, ma na-akọwakwa usoro nke Teshuvah, ma na-agụghachi omume ọma nke onye edemede nke Teshuvah (lee Ibid. F) nke na-adabere na ohere na ọrụ ime ihe. zaa. Anyị ahụghị ụdị odide a na faịlụ halchic ndị ọzọ nke Maimonides. Ọ na-apụta na ihe ndị a niile bụ iji mee ka anyị kwenye na a ghaghị ịza azịza, na enwere ike ime ya. Ihe kpatara Maimonides n'ime akwụkwọ halak ya ji nwaa ime ka anyị kwenye ime mitzvah, bụ na ọ dịghị iwu ọ bụla na mitzvah (= azịza). Ntọala ya dị na Sabra, ya mere Maimonides ga-emerịrị ka anyị kwenye na ọ bụ iwu na ọ bụ iwu na-eme ya, na nke a abụghị nke ọ bụla n'ime iwu kachasị mkpa (ma lee. Lacham PG HG, onye dere na onye na-echegharịghị na omume ga-ekpe ikpe maka ya, na ahụhụ bụ mmehie n'onwe ya. N'adịghị ka okwu nkeọnọdụ Nke a dị n'elu na ịzaghị azịza abụghị n'ezie iwe. Ma eleghị anya, e nwere nkewa n'etiti ime na afọ ndị ọzọ).
N'akụkụ akụkụ nke okwu anyị anyị na-achọpụta na ọ na-abụkarị enweghị iwu gbasara ọrụ halakhic n'ihi na ha adịghị mkpa nke ukwuu ka etinyere ya na halakhic dauriyta. Mana enwere mitzvot nke enweghị iwu ahụ bụ n'ihi nke ọma maka ọtụtụ mkpa na nke ọma. Na mitzvos nke bụ ntọala n'ime ọrụ nke Gd, Torah na-akpachapụ anya ka ọ ghara inye anyị iwu, ka anyị mee ya site na iteruta deltata.
Onye rabaị ahụ dere ụkpụrụ bụ́ isi yiri nke ahụ n'akwụkwọ ozi ya banyere ọrụ omume ọma. Ọ na-akọwa n'ebe ahụ na n'ihe ndị bụ́ isi n'ọrụ Chineke, a na-akwado echiche mbụ na onye na-adịghị enye iwu ma na-eme ihe dị ukwuu. N'ihi ya, Torah enyeghị anyị iwu banyere ha. Ọrụ ịza bụ isi ihe atụ nke a.
Nna na Eze anyị, anyị alaghachila na nchegharị zuru oke n'ihu gị.
A na m arịọ ndị Beit Yeshiva dum, ndị Rosh Yeshiva Shlita, ndị ọrụ raara onwe ha nye, ụmụ akwụkwọ niile hụrụ n'anya na ezinụlọ ha n'ozuzu Beit Yisrael dum, ezigbo ederede na mbinye aka n'akwụkwọ Tzaddiks. Ka ọ bụrụ afọ nke ịga nke ọma na ezumike dị nsọ. Otu afọ nke ahụ ike (karịsịa maka ọmarịcha nwa Israel Yosef ben Ruth ben Tolila na maka anyị niile). Otu afọ nke aliyah na Torah na-arụ ọrụ, na ịga nke ọma n'omume anyị niile.
 Ma ee ọ bndu mmadu, NaShaarei Teshuvah R.I.
 Ọ bụ ezie na GRIP na nkọwa ya kaAkwụkwọ nke Iwu N'ime Rasg, na-akọwa na usoro Rasg nwere mitzvah iji rie anụ mgbe ọnọdụ anyị dị mma, nke a mụtara n'amaokwu a: Ma nke a bụ ụzọ pụrụ iche, na n'ezie iwu igbu mmadụ dịkwa na ọnọdụ ebe mmadụ na-achọ naanị iri anụ, ọbụlagodi mgbe oke ya adịghị obosara ma ọ dịghị mitzvah na-eri ya.
 Ọhụụ ya dị mfe: ọ bụrụ n'ezie nchegharị na-enweghị nkwupụta bụ mmehie, ya bụ, ịkagbu, n'ihi na mgbe ahụ ọnọdụ nke onye mehiere ma chegharịa na-enweghị nkwupụta dị njọ karịa onye mehiere na-echegharịghị ma ọlị. Nke a bụ eleghi anya n'ezie.
 Enwere ọtụtụ ihe atụ nke mitzvos nke gụnyere nkọwa ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, iwu nke ụdị anọ, ma ọ bụ iwu nke tassel (acha anụnụ anụnụ na ọcha). Hụ banyere nke a na mgbọrọgwụ XNUMX nke Maimonides.
 Ụfọdụ akọwawokwa na enweghị mitzvah nke Yishuv Ai site na ọnụ ọgụgụ nke mitzvos, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ihe àmà na-egosi na Maimonides kwetakwara na nke a bụ mitzvah sitere na Torah.
 Hụkwa akụkọ ndị a "Ntụnye aka na Challah: N'etiti Iwu na Uche Chineke", N'ehihie Kaz (na ebe ahụ ka m na-amata ọdịiche dị n'etiti ụdị mitzvos abụọ).
Soro ndị ndebanye aha 3,091 ọzọ
Mkpa nke nkà ihe ọmụma na ajụjụ nke ihe mere anyị ji kwere
Ọ dabara nke ọma m nọdụrụ na ya n'oge ọnwụ ya.
Ihe niile bụ injinia. Kedu ihe dị mkpa maka ụdị ndekọ ego niile '?
mikyab Gbanye Azịza nye Itamar Ben Gvir
mikyab Gbanye Iran ọ nọ ebe a? Na Ọganihu na Ọdịmma Liberalism (Column 483)
Obere obere (nke Hananel) Gbanye Iran ọ nọ ebe a? Na Ọganihu na Ọdịmma Liberalism (Column 483)
Yossi Laor Gbanye Iran ọ nọ ebe a? Na Ọganihu na Ọdịmma Liberalism (Column 483)
Hananel Gbanye Iran ọ nọ ebe a? Na Ọganihu na Ọdịmma Liberalism (Column 483)